Sakaiza tena akaiky mihoatra ny rahalahy i Jesôsy
"Izay maro sakaiza tsy maintsy tra-pahoriana; Fa misy sakaiza tia, izay mifikitra noho ny rahalahy aza." - Ohab. 18:24.
Hisy mandrakariva ny fahadisoam-panantenana kanefa ataovy ao an-tsaina lalandava fa i Jesôsy, ilay Mpamonjy velona sy nitsangana tamin'ny maty, no Mpanavotra sy Mpamerina anao amin'ny laoniny indray. Tia anao Izy ary tsara kokoa ny mizara ny fitiavany noho ny miray latabatra amin'ny zanak'andriana ka ho tafasaraka Aminy (...) Manatona an'i Jesôsy isan'andro fa tia anao Izy. Sokafy ho Azy tsy misy fepetra ny fonao. Tsy mba misy fahadisoam-panantenana ao Aminy. Tsy hahita mpanolo-tsaina na mpitari-dàlana mahatoky na koa fiarovana azo antoka mihoatra noho Izy ianao. — Lt 1, 1896.
Nandritra ny fizahan-toetra rehetra nanjo anao, dia nisy Namana iray nitoetra teo anilanao mandrakariva, sady efa nilaza hoe: "Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao iontolo izao." — TFC 2;271.
Impiry impiry anefa ny Tompo no nafoy noho ny fiarahana amin'ny hafa na koa noho ny zavatra tsy dia misy antony loatra! (...) Tsy sahintsika akory ny hahatonga ny anarany ho voatonon-dava eo am-bavantsika ary ny fitiavany sy ny fahatsiarovana Azy dia tsy ao am-pontsika akory. "Tsara izany," hoy ilay mpampianatra tsy rototra, "manjary ataontsika tahaka ny olombelona be loatra indray i Kristy amin'izany". Ny tenin'Andriamanitra anefa dia manome toky fa ireo foto-kevitra ireo indrindra no tena tokony hananantsika. Io tsy fisian'ny fomba fijery mahasoa sy mazava tsara mikasika an'i Kristy io no manakana ny maro tsy hanana fanandramana tena izy mikasika ny fahalalana an'i Jesôsy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika. Izany no antony mahatonga ny olona maro ho feno tahotra sy ahiahy ary malahelo lava. Manjavozavo sady maizimaizina ary mahavery hevitra azy ny foto-kevitr'izy ireo mikasika an'i Kristy sy ny drafi-pamonjena (..)
Raha misy ny fotoana ilan'ny olona ny fanatrehan'i Kristy eo ankavanany, dia amin'izao fotoana izao indrindra izany. Rehefa tonga tahaka ny ranobe manafotra mantsy ilay fahavalo, dia amin'izay fotoana izay ny Fanahin'ny Tompo no hanangana faneva hanohitra azy. — Y1, 19 Jolay 1894.
Endrey izany hasarobidin'ny firaisana amin'i Kristy! Tombontsoa ho antsika ny mifaly amin'ny firaisana toy izany raha katsahintsika. — ST, 07 Desambra 1882.
Hanananao ny toky maharitra mandrakizay fa manana namana izay akaiky kokoa mihoatra noho ny rahalahy ianao. TFC 2:271.